​नारायणी नेशनलको नाफा सवा १८ करोड
काठमाडौं । नारायणी नेशनल फाइनान्सले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा १८ करोड ३० लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । जुन नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा सामान्य बढी हो । अघिल्लो वर्ष फाइनान्सले १८..
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा १ अर्ब ५७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो वर्षकोभन्दा ३ करोड रुपैयाँले मात्रै बढी हो । राष्ट्र..
एनआईसी एशियाको ८३ करोड १५ लाख कमायो, १३ करोडले घट्यो नाफा
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकको नाफा १३ करोड रुपैयाँ घटेको छ । गत आर्थिक वर्षमा व्याज आम्दानी घटेपछि बैंकको खुद नाफामा असर गरेको हो । वासलातको आकार बढेपनि बैंकले खुद..
​माछापुच्छ्रे बैंकको नाफा ६१ करोड ३४ लाख, १६ करोडले बढ्यो
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ६१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यो नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै १६ करोड रुपैयाँले बढी हो । बैंकको..
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको नाफा ४ करोड घटेर १ अर्ब २९ करोड
काठमाडौं । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले गत आर्थिक बर्षमा एक अर्ब २९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । बैंकले अघिल्लो आर्थिक बर्षमा एक अर्ब ३३ करोड ६५ लाख..
​नेपाल बैैंकको नाफा १९ करोडले घट्यो
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक लिमिटेडको खुद नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा २० करोड रुपैंयाले घटेको छ । कर्मचारी खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा थोरै मात्र घटाएको..
काभ्रेको बनेपामा ग्लोबलको ८६ औं शाखा विस्तार
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैङ्क लिमिटेडले शुक्रबारदेखि काभ्रेको बनेपामा आफ्नो ८६औं शाखा विस्तार गरेको छ । काभ्रेको ब्यापारीक केन्द्रको रुपमा रहेको बनेपा बजार र त्यस वरपरका बासिन्दालाई सेवा पुर्याउने उद्धेश्यले शाखा..
मेट्रो डेभलपमेन्टको नाफा ४ करोड ७६ लाख
काठमाडौं । मेट्रो डेभलपमेन्ट बैंकले गत आर्थिक बर्षमा ४ करोड ७६ लाख खुद नाफा कमाएको छ । यो नाफा अघिल्लो बर्षको तुलनामा एक करोड ३० लाख रुपैयाँ बढि हो ।..
​विश्व बैंकको एकतीस अर्ब सहुलियत ऋण सहयोग
काठमाडौं । विश्व बैंकले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम र अवास पुनःनिर्माण परियोजना कार्यान्वयन गर्न रु ३१ अर्ब सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा..
काठमाडौं । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । आफ्नो स्वामित्वमा रहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर बिक्री गरेका कारण बैंकको नाफा बढेको हो । अघिल्लो..
नियमित आम्दानी नहुँदा अधिकांश युवा वित्तीय पहुँच बाहिर
काठमाडौ । कुल वयस्क जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढीले नियमित आम्दानी गर्ने अवसर प्राप्त नगरेका कारण मुलुकको ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार हुन नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । ‘नेपाल..
​गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको नयाँ संचालक समिति गठन
काठमाडौं । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि। को छैठौं साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। उक्त साधारण सभाले कम्पनीको नयाँ संचालक समिति गठन गरेको छ । संस्थापक संचालकमा मोतीलाल दुगड, मालचन्द दुगड,..
​नबिल बैंकको नाफा २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ, अघिल्लो वर्ष भन्दा २२ करोड रुपैयाँले घट्यो
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार स्प्रेड दर कायम गर्दा नविल बैंकको नाफा घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ को तुलनामा आव ०७१/०७२ मा नविल बैंकको नाफा २२ करोड रुपैयाँले घटेको हो..
​जेएमईको भिबोर र सिटी डेभलपमेन्टसँग रेमिट्यान्स सम्झौता
काठमाडौं । जापान मनि एक्सप्रेस (जेएमई) ले आफ्नो सेवा बिस्तार गर्ने क्रममा भिवोर विकास बैंक र सिटी डेभलपमेन्ट बैंकसँग रेमिट्यान्स सम्झौता गरेको छ। सो सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा जेएमईका तर्फबाट अध्यक्ष दीपेन्द्र जोशी..
नेपाल एसबिआइ बैंकको नाफा १ अर्ब ६ करोड, अघिल्लो वर्षको भन्दा १५ प्रतिशतले बढी
काठमाडौं । नेपाल एसबिआइ बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । अघिल्लो वर्ष ९२ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत..
​प्राइम बैंकले ८० करोड कमायो, अघिल्लो बर्ष भन्दा २५ करोड बढी
काठमाडौं । प्राइम कमर्शियल बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ८० करोड १२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले ५५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ कमाएको थियो । व्याज..
​पुँजी बढाउने पाँच वर्षे माग अस्वीकार
काठमाडौं । नेपाल बैकर्स संघले राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा।चिरञ्जीवी नेपाललाई पुँजी बढाउन पाँच वर्ष समय दिन माग गरेको छ। संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा गएको बैंकरको टोलीले चुक्ता पुँजी बढाउने नीति ठीक..
​लघुवित्तको कर्जा ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने तयारी:नेपाल राष्ट्रबैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रबैंकले लघुवित्त कम्पनीले लिने मनपरी ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने तयारी गरेको छ। गरिबका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त कम्पनीले कर्जामा २० प्रतिशतभन्दा माथि ब्याजदर लिएपछि यसको व्यापक आलोचना..
प्रभू बैंकको नाफा एक अर्ब तीन करोड रुपैया
काठमाडौं । वितेका तीन वर्ष निरन्तर घाटामा रहेको प्रभू बैंकले पहिलोपटक एक अर्ब नाफा कमाएको छ । संभावित जोखिम व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको १ अर्ब ८२ रुपैयाँ फिर्ता (राइटव्याक) गरेपछि बैंकको..
​कलंकी र थलीमा कुमारी बैंकले शाखा खोल्यो
काठमाडौं । कुमारी बैंकले काठमाडौंको कलंकी र भक्तपुरको थलीमा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । थलीमा निजी क्षेत्रका बैंकको यो पहिलो उपस्थिति भएको बैंकले जनाएको छ । बैंकले ३६ शाखा र..
​कास्की फाइनान्स र कामना विकास बैंक गाभिने
काठमाडौं । पोखरामा प्रधान कार्यालय रहेको कास्की फाइनान्स र कामना विकास बैंक एकआपसमा गाभिने भएका छन् । गाभिएर राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक बन्ने सहमतिपत्रमा सोमबार हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । सहमतिपत्रमा..
​सिद्धार्थले कमायो १६ करोड, अघिल्लो बर्ष भन्दा डेढ गुणाले बढी
काठमाडौं । सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १६ करोड १८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । बैंकको गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक विवरण अनुसार बैंकले..
​एनएमबि बैंकद्वारा नेपालमै पहिलो पटक मोबाइल बैंकिङमा डिम्याट सेवा
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ सेवामा डिम्याट सेवापनि समावेश गरेको छ । यसअन्तर्गत ग्राहकले मोबाइल फोनमा आफ्नो डिम्याट खाता हेर्न सक्नेछन् । मोबाइल फोनमा डिम्याट खाता हेर्न सकिने गरी..
​क्यापिटल मर्चेन्ट डुबाउने फरार प्रतिबादी पक्राउ
काठमाडौं । बैंकिङ कसुरको सजाय सुनाइएकी फरार प्रतिबादी तुलसाकुमारी धमला पक्राउ परेकी छन्। उनलाई टिकाथली गाविस, ललितपुरबाट प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले आइतवार पक्राउ गरेको हो। पक्राउपछि उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बुझाइएको..
गण्डकी विकास बैंकले १० करोड ५६ लाखको हकप्रद सेयर जारी गर्ने
काठमाडौं । गण्डकी विकास बैंकको शनिवार सम्पन्न भएको विशेष साधारण सभाले १० करोड ५६ लाख रुपैयाँको हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। चुक्ता पँुजी ३५ करोड २० लाखको ३०..
​नेपाल एसबीआई बैंकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ७ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्‍यो
काठमाडौं । भूकम्पपछिको पुनर्निर्मा‍‌ण तथा पीडितहरुको सहयोगार्थ नेपाल एसबीआई बैंकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ७ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। बैंकका प्रबन्ध संचालक आलोककुमार शर्मा तथा डेपुटी सीईओ विजयकुमार त्यागीले..
सिर्जना फाइनान्सको नाफा आठ करोड
मोरङ । सिर्जना फाइनान्स लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा झन्डै आठ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । कार्यालयका अनुसार आव २०७१/०७२ मा बैंकले लगानी गरेको रकममध्ये सात करोड ९४ लाख..
​बैंक तथा वित्तिय संस्थाप्रति थप कसिलो बन्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, अन्य कर्मचारीको अधिकार, जिम्मेवारी, उनीहरुले भोग चलन गर्न पाउने ऋणँ सुविधामा थप सीमा तोक्दै एकीकृत निर्देशन २०७२ जारी..
ग्लोबल आइएमइ बैङ्कले १ अर्ब कमायो
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैङ्क लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५९ लाख रूपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको भन्दा ३.२८ प्रतिशतले बढी हो । बैंकको..
मनास्लु विकास बैंकको नाफा ६१ प्रतिशतले बृद्धि
काठमाडौं । मनास्लु विकास बैंकले आ.व. २०७१/०७२ मा नाफा अघिल्लो बर्षको तुलनामा ६१ प्रतिशतले बृद्धि गरि रु ३ करोड ८७ लाख रुपैया संचालन मुनाफा आर्जन गरेको छ । आ.व. २०७०/०७१ मा..
Results 1896: You are at page 55 of 64